I-KsixFitness Explorer 2, sihlaziya i-smartwatch ngokuzimela konyaka owodwa [UKUBUYEKEZA] | Izindaba zamagajethi
I-KsixFitness Explorer 2, sihlaziya i-smartwatch ngokuzimela konyaka owodwa [BUYEKEZA]
Izesekeli zezemidlalo ngokuvamile ziyizinto zobuchwepheshe ezikhanga kakhulu kubathandi bazo zonke izinhlobo zamadivayisi, ngaphandle kwalokhu, imakethe engapheli yenza abaningi bazizwe bengabaza ngedivayisi abangabamba ngayo. Kungakho sithanda ukukulethela izibuyekezo eziphelele zamadivayisi afana nalokhu Ukuhlola Ukuqina 2 de I-Ksix.
Ngakho-ke hlala nathi futhi uthole ukuthi ungayiphatha kanjani yonke idatha yakho yokuqina kanye nezaziso ngaphandle kokukhathazeka ngokushaja ibhethri nsuku zonke.
Njengenjwayelo, asihlose ukushiya noma iyiphi ingxenye efanelekile yalokhu okusinikeza khona Ukuhlola Ukuqina 2, iwashi elivezwa kanjena nguKsix:
Thatha ukuqeqeshwa kwakho kuye ezingeni elilandelayo futhi ufeze imigomo yakho yokufaneleka ngosizo lweKsix Fitness Explorer 2 Sports Watch. Ukukhanya kwayo, ukwakheka kwe-ergonomic nokukhangayo kukwenza umlingani wakho omuhle kakhulu wokuqeqesha osukwini lwakho nosuku.
1 Idizayini yeFitness Explorer 2, yawo wonke umuntu nakho konke
2 Izici zobuchwepheshe, ukuhlanganiswa kokusebenza
3 Amandla wokulinganisa nokusebenza kohlelo Fundo Isongo
4 Sebenzisa ulwazi nge-Fitness Explorer 2
Idizayini yeFitness Explorer 2, yawo wonke umuntu nakho konke
Sibhekene newashi lokwakha lakudala, empeleni, ngeke wazi ukuthi iwashi elihlakaniphile uze wazi okuthile ngalo. Ngokudayela okuyindilinga, izinkinobho ezine ezizungeze idivaysi kanye nebhande le-silicone elibunjiwe lakudala lenduduzo okufanele ihlinzekwe iwashi lalezi zici. Ngaphambili sinesikrini esidala se-LCD se-monochrome esifana nalesi esingasithola kuwashi le-Casio lempilo yonke. Umehluko ukuthi isikhala sisetshenziselwa ukusizakala ngezici zayo eziningi.
Ibhande linengwegwe ejwayelekile, lokhu kusho ukuthi uma singayithandi leyo efakwe njengejwayelekile, noma sifuna ukuyiguqula ngenxa yokonakala, nje kuzofanele sikhethe noma iyiphi intambo yendawo esiyithandayo. Ngendlela efanayo, i-chassis yewashi yenziwe ngepulasitiki, kanti ngaphambili sinomqhele wensimbi ohamba ngendlela engahambisani newashi, yize ngingakwazanga ukucacisa ngqo ukuthi kusebenza kanjani.
Izici zobuchwepheshe, ukuhlanganiswa kokusebenza
Imininingwane eyinhloko edonsela ukunakekelwa kwabasebenzisi abambalwa okuhle ukuthi inokuzimela okungafika onyakeni owodwaKulokhu, inebhethri elijwayelekile le-CR2032, ngakho-ke ukuvuselela kabusha idivayisi ngeke kube yisithiyo.
Isibonisi esingemuva se-LCD
Ukuxhumana: I-Bluetooth 4.0
Ibanga lokusebenza: amamitha ayi-10
Umsindo wezaziso nama-alamu
Ukumelana namanzi kwe-IP68: kufinyelela kumamitha angama-30 ukujula
Ukuzimela: 1 unyaka
Kubalulekile ukugcizelela ukuthi inakho ngqo Ukuqinisekiswa kwe-IP68Lokhu kusho ukuthi sizokwazi ukuyimanzisa futhi siyisebenzise cishe kuzo zonke izimo ezivela ngaphandle kokwesaba ukuthi izolimala kakhulu. Kuwashi njengoba sishilo ngaphambili, kuwo wonke umuntu nakho konke.
Amandla wokulinganisa nokusebenza kohlelo Fundo Isongo
Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi iwashi lethu likwazi ukuqapha ini, ngoba lokhu kungumlingani ohamba phambili Fundo Isongo, isicelo esinikezwa yifemu ukuze sikwazi ukubheka yonke imininingwane yomsebenzi wethu, ngaleyo ndlela sibeke izinhloso futhi siqiniseke ukuthi senza ngokuvumelana nohlelo esizibekele lona. Uhlelo lokusebenza yisoftware yakudala enalezi zinhlobo zamagajethi, ngaphandle kokuba ubuciko bangempela bokuthuthuka, kungaphezu kokwanele ukuqapha izigaba ngaphandle kwenkinga eningi kakhulu, yize kusobala ukuthi kungathuthukiswa.
I-Pedometer (bala izinyathelo)
Ikhawunta yekhalori esetshenzisiwe
Ngaphandle kwakho konke lokhu, sizokwazi ukuthola izaziso ewashini lezingcingo, imiyalezo kanye nama-alamu, futhi sisebenzise iwashi njengenhlamvu yekhamera ye-smartphone yethu, imininingwane lapho sifuna ukuthatha izithombe zobuciko noma nge-tripod. Lolu hlelo lokusebenza luhambisana namadivayisi we-Android njenge-Android 4.3, kanye namatheminali we-Apple we-Apple njenge-iOS 7.0.
Sebenzisa ulwazi nge-Fitness Explorer 2
Iqiniso ukuthi sibhekene nakho idivayisi elula kakhulu ukubhangqa Eqinisweni, singakuvumelanisa efonini yethu ngaphandle kwesidingo sokufaka uhlelo lokusebenza lwe-Fundo Bracelet kudivayisi yethu, yize ngincoma ngokuqinile ukuyifaka, empeleni. Ngakolunye uhlangothi, lokho kubuka kwewashi okudala futhi ikakhulukazi intengo, kusenza singazizwa sibophezeleke ngokwedlulele kuzaziso futhi singakujabulela ukugqoka isesekeli esisodwa ngaphandle kokwesaba ukuphuma kwebhethri noma ukulilimaza.
Ngakolunye uhlangothi, kusobala ukuthi ayinayo inzwa yenhliziyo, kunengqondo, ngoba ayinayo ibhethri, ngakho-ke ayikwazi ukujabulela ukuzimela okunjalo, kimi ukuphela kwento ebengizoyikhumbula, yize lokho okushiwoyo, njengesisetshenziswa sezikhathi zethu zokuziqeqesha ezintabeni noma ibhayisikili, lingaphezu kokwanele. Iqiniso ukuthi njengoba idivayisi yokuphatha nokuxhumana nezaziso ingasebenzi, akufanele sikhathazeke ngalokho, empeleni, ngaphezu kweSmartwatch esingayibheka njengewashi elinokusebenza okuningi, futhi lokho okungezwe enanini layo, kuyenza kuthakazelisa impela kulabo abaphika ubuchwepheshe obunjalo.
I-Six Fitness Explorer 2, sihlaziya i-smartwatch ngokuzimela konyaka owodwa
Sibhekene newashi elishibhile elinokusebenza okuningi, liphuma kumqondo we-Smartwatch futhi linikeza iwashi elinekhono kakhulu kulabo abangafuni lutho ngaphandle kokuqapha imisebenzi yabo ngaphandle kokuboshelwa kuzici (ezinhle nezimbi) ukuthi iwashi elihlakaniphile okunikezwayo ngesikrini. Akufanele uphuthelwe yilutho uma uthenga leli washi, ngoba kufanele wazi ukuthi ukhetha ini, ngendlela efanayo naleyo intengo yalo yenza ikhange ngokwedlulele ngisho nakwalabo abangayifuni ngempela igajethi kodwa iwashi elihlukile.
Ungamthola kuwebhusayithi yakhe ngemali engaphansi kwe- € 40, futhi iqiniso ukuthi likhanga ngokwedlulele uma kubhekwa ukuthi kungaba imininingwane ethokozisayo njengesipho. Ngifuna ukugcizelela ukuthi uma okudingayo kuwashi elihlakaniphile, lokhu akuyona eyakho, nokuthi inani osinike lona lizosebenza kakhulu njengesilinganiso kunedatha eqondile ngokwesayensi, yebo, ngaphezulu kokwanele ukuqapha kusuka ku umsubathi noma umgijimi. Uma ucabanga ngentengo, anginayo enye indlela ngaphandle kokuyinika izinkanyezi ezine.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-KsixFitness Explorer 2, sihlaziya i-smartwatch ngokuzimela konyaka owodwa [BUYEKEZA]
I-Face ID ye-IPhone X isasele iminyaka emibili ngaphambi komncintiswano